FAQ/လမ်းညွှန်ချက် - onepay
FAQ / လမ်းညွှန်ချက်
Onepay FAQs တွင် Onepay ၏ အမေးများသောမေးခွန်းများအတွက် အဖြေများကို ရှာနိုင်ပါသည်။
Onepay တွင် Sign up ပြုလုပ်နည်း၊ Top up ပြုလုပ်နည်း နှင့် အခြားမေးခွန်းများစွာအတွက် အဖြေများကိုရှာပါ။
Onepay e-ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ပိုက်ဆံထည့်ပါ။
Onepay e-ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ပိုက်ဆံထည့်ပါ။ (Parent block)
Onepay agents များမှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
၁. ပင်မစာမျက်နှာအောက်ရှိ ‘Add Money’ ကိုရွေးပါ။
၂. ငွေသားသွင်းချင်တယ်ဆိုရင် ‘Onepay Agents’ ကိုရွေးပြီး နီးစပ်ရာ Onepay အေးဂျင့်များကိုရှာပါ။
၃. မြေပုံမှတဆင့် အနီးဆုံး Onepay agent ကိုရှာကာ အခမဲ့ငွေဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။
TrueMoney agents များမှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
၂. ငွေသားသွင်းချင်တယ်ဆိုရင် ‘TrueMoney Agents’ ကိုရွေးပြီး နီးစပ်ရာ TrueMoney အေးဂျင့်များကိုရှာပါ။
၃. TrueMoney နဲ့ငွေဖြည့်တာပထမဆုံးလား? အောက်မှာပြထားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အနီးဆုံး TrueMoney agent တွေကိုရှာဖို့ ညာအပေါ်ထောင့်က GPS icon ကိုထိလိုက်ပါ။
၄. မြေပုံမှတဆင့် အနီးဆုံး TrueMoney agent ကိုရှာကာ အခမဲ့ငွေဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။
AGD Bank account မှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
၂. AGD Bank အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင် Top up feature မှာ Link ထားနိုင်ပါတယ်။ ‘AGD Bank Accounts’ ကိုရွေးပါ။
၃. ‘Add AGD Bank Account’ ကို နှိပ်ပါ။ Onepay အကောင့်ဖွင့်စဉ်က အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ AGD Bank အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ပြီး အကောင့်နာမည်ပေးလိုက်ပါ။
၅. OTP ဖြည့်စွက်ပြီးရင်တော့ AGD Bank account နဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆. ငွေဖြည့်ဖို့အတွက် linked ထားတဲ့ AGD Bank account ကိုရွေးပါ။
၇. ဖြည့်လိုတဲ့ပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ (သို့မဟုတ်) ဖြည့်လိုတဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။
၈. Passcode ၆ လုံးကို ရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ ငွေဖြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။
၉. သင့်အကောင့်ထဲသို့ အောင်မြင်စွာနဲ့ ငွေဖြည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. ‘Quick Top Up’ ကို ရွေးပြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ AGD Bank account မှတဆင့် အကြိမ်တိုင်း အဆင်ပြေစွာငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Debit/Credit Cards များမှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
၁. MPU debit (ဒါမှမဟုတ်) Visa/Master Credit ကတ်တွေပဲရှိတာလား? ပင်မစာမျက်နှာက ‘Link Card’ (သို့မဟုတ်) ‘Add Money’ ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၂. အဆင်ပြေရာ MPU/ Visa/ Mastercard တွေနဲ့ သုံးဖို့ ‘Debit/ Credit Cards’ ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၃. MPU ကတ်နဲ့ငွေဖြည့်ဖို့ ငွေဖြည့်မယ့်ပမာဏကိုဖြည့်သွင်းကာ MPU ကိုရွေးချယ်ပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ရာ ‘Next’ ကိုနှိပ်ပါ။
၄. အချက်အလက်များဖြည့်ကာ ‘Next’ ကိုနှိပ်ပါ။
၅. Onepay အကောင့်ထဲကို အောင်မြင်စွာ ငွေဖြည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
၆. Visa/ Mastercard နဲ့ငွေဖြည့်ဖို့ ငွေဖြည့်မယ့်ပမာဏကိုဖြည့်သွင်းကာ Visa/ Mastercard ကိုရွေးချယ်ပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ရာ ‘Next’ ကိုနှိပ်ပါ။
၇. Credit card အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီး နောက်ပိုင်းငွေဖြည့်မှုများတွင်ပါ အဆင်ပြေစေရန် ‘Save Card’ ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးနောက် Top Up ကို နှိပ်ပါ။
၈. OTP ဖြည့်ပြီးရင်တော့ငွေဖြည့်ခြင်း ပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
၉. သင့်အကောင့်ထဲကို အောင်မြင်စွာငွေဖြည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကတ်ကိုလည်းချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
123 agents များမှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
၂. အခမဲ့ငွေဖြည့်ဖို့အတွက် ‘123 Agents’ ကို ရွေးကာ ငွေဖြည့်လိုက်ပါ။
၃. ငွေဖြည့်သွင်းမယ့် ပမာဏကိုရွေးချယ်ကာ ‘Next’ ကိုနှိပ်ပါ။
၄. ကိုယ်နဲ့ အနီးဆုံး payment options ကိုရွေးချယ်ပါ။
၅. Transaction အတည်ပြုလျှင် သင့်အနေနဲ့ 123 code ကို SMS နှင့် အီးမေးလ်မှ တဆင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကုတ်ကို 123 agents များထံတွင် ပြသပြီး ငွေဖြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးလိုက်ပါ။
Scan & Pay ကို အသုံးပြုရန်။
၁. ပင်မစာမျက်နှာအောက်ပိုင်းရှိ ‘Scan & Pay’ ကိုရွေးပါ။
၂. မိမိဖုန်းရှိ QR scanner ဖြင့် Onepay merchant ၏ QR code ကိုဖတ်ပါ။
၃. ပေးချေမယ့် ငွေပမာဏကိုဖြည့်ပြီး မှတ်ချက်ဖြည့်သွင်းပါ (သို့မဟုတ်) promo code ရှိပါကဖြည့်သွင်းကာ transfer ကိုနှိပ်ပါ။
Onepay ဆိုတာ ဘာလဲ?
Onepay app က အသုံးပြုသူများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေစေသော mobile app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Onepay app ကနေ ငွေကြေးလုပ်ငန်းများအား online မှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုများအား အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ပေးချေနိုင်ခြင်း၊ ဘဏ်များကို တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော အစားအစာမှာယူခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ကားလက်မှတ်/ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းရှော့ပင်နှင့် အလှူအတန်းများကို မိမိနှစ်သက်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Onepay ကို ဘယ်သူတွေအသုံးပြုနိုင်သလဲ?
စမတ်ဖုန်းနှင့် ဆင်းမ်ကတ်ရှိသော မည်သူမဆို Onepay app ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့် ဖွင့်ဖို့ ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါသလား?
ဘဏ်အကောင့်ရှိဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်နဲ့မဆို စာရင်းသွင်းပြီး Onepay အကောင့် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့် ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?
Onepay app ကို App Store/ Google Play Store မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ပြီး အွန်လိုင်းကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက Onepay Call Center – 09688 383838 ကို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် နီးစပ်ရာ AGD ဘဏ်ခွဲများနဲ့ Onepay ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။
Near Me ဆိုတဲ့ tab က ဘာအတွက် အသုံးပြုရတာလဲ။
Near Me ဆိုတဲ့ tab မှာ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းအတွက် အနီးဆုံး Agent နှင့် Scan & Pay အတွက် ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အနီးဆုံးဆိုင်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Onepay app ကို အမြဲတမ်း အခမဲ့အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ရပါတယ်။ Onepay app ကို Google Play (သို့) App Store ကနေ အချိန်မရွေး အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့် charges မျှ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
Onepay အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် -
၁။ Onepay app ရဲ့ ဘယ်ဖက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ tab ကိုဝင်ပြီး “Onepay တိုက်ရိုက်အကူအညီ” ကိုရှာပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ Onepay Facebook Page (သို့) Instagram Page @onepaymm သို့ message ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
၃။ hello@onepay.com.mm ကို အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်။
၄။ Onepay website ဖြစ်တဲ့ www.onepay.com.mm မှတစ်ဆင့် request တင်နိုင်ပါတယ်။
၅။ Onepay Customer Service နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ 09-6883 83838 ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရပါမယ်။
Low-KYC (unverified) အကောင့်ဆိုတာ Onepay အကောင့်ဖွင့်ထားပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်သွင်းပြီး စာရင်းမသွင်းရသေးသော အကောင့်များကို ဆိုလိုပါတယ်။ Low-KYC အကောင့်တွေအတွက် တစ်ရက်လျှင် transaction limit 400,000/- ကျပ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ စာရင်းသွင်းခြင်းကို Onepay app ရှိ ‘My Account’ မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်နှင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ပြီး လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
High-KYC ဆိုတာ ဘာလဲ?
High-KYC ဆိုတာ သုံးစွဲသူမှ စာရင်းသွင်းပြီး Onepay မှ အတည်ပြုထားပြီးတဲ့ အကောင့်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ High-KYC အကောင့်တွေအတွက် တစ်ရက်လျှင် transaction limit 10,000,000/- ကျပ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့်ကို နေ့စဉ် transaction limit ဘယ်လောက်ထိ အသုံးပြုလို့ရသလဲ?
Low-KYC အကောင့်အတွက် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး transaction limit (၄) သိန်းကျပ်နှင့် High-KYC အကောင့်အတွက် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး transaction limit သိန်း (၁၀၀) ကျပ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့်ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ?
၁. ကျွနု်ပ်၏ အကောင့်ထဲသို့သွားပါ။
၂. အသုံးပြုမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် လက်မှတ်ထည့်သွင်းပါ။
၃. အသုံးပြုမည့်သူ၏ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ် ဖြည့်စွက်ပြီး Save နှိပ်ပါ။
၄. အသုံးပြုမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်တွင် အတည်ပြု sms တစ်စောင်ရရှိပါမည်။
High-KYC အကောင့်အတွက် အတည်ပြုချိန် ဘယ်လောက်ကြာသလဲ?
ရုံးဖွင့်ရက် (၃)ရက်အတွင်း အတည်ပြုပေးပါတယ်။ လူကြီးမင်း ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များတွင် လိုအပ်ချက်များရှိပါက Onepay ဘက်မှ ဆက်သွယ်ပြီး ကူညီပါလိမ့်မယ်။
Onepay အကောင့်ကို အိမ်နာမည်/ အခြားနာမည်နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါသလား?
Low-KYC အကောင့်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် high-KYC အကောင့်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်လိုပါက မိမိမှတ်ပုံတင်တွင် ပါရှိသော နာမည်အပြည့်အစုံကိုသာ ဖြည့်သွင်းရပါမယ်။
အသုံးပြုသူတစ်ယောက်တွင် High-KYC အကောင့် တစ်ခုထက်ပိုပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
ဖုန်း ၂ လုံးနဲ့ အကောင့်တစ်ခုကို ပြိုင်တူအသုံးပြုလို့ရလား?
ဖုန်းတစ်လုံးတည်းနဲ့သာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးစနစ်အရ အခြားဖုန်းဖြင့်အသုံးပြုပါက သင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းရှိအကောင့်မှာ အလိုအလျောက် ထွက်သွားပါမယ်။
Onepay Call Center သို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီး မိမိ Onepay အကောင့်ကို ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲ လုပ်လို့မရအောင် ပြုလုပ်ပေးရန် အကြောင်းကြားပါ။
စာရင်းသွင်းပြီးသား ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်ပြောင်းလို့ရပါသလား?
စာရင်းသွင်းပြီးသား ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ အခြားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု အသုံးပြုပြီး Onepay အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီး အကောင့်အဟောင်းရှိငွေများကို အကောင့်အသစ်သို့ ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
Add/ Withdraw Money
Onepay အကောင့်ထဲကို ငွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ?
လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခုရှိပါတယ်။
၁. Debit/ Credit Card များဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
၂. TrueMoney ဆိုင်များမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
၃. 123 Services များတွင် ငွေဖြည့်ခြင်း
၄. နီးစပ်ရာ Onepay ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ငွေဖြည့်ခြင်း
၅. AGD Bank Account မှ တိုက်ရိုက်ငွေဖြည့်ခြင်း
Bank Account နဲ့ Onepay account ကို ဘာလို့ချိတ်ဆက်လို့ မရတာလဲ?
Onepay Account ကို ယခုအချိန်မှာ AGD Bank account နဲ့သာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့အပြင် AGD Bank Account ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Onepay account ဖုန်းနံပါတ် တူညီမှသာ ချိတ်ဆက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့်သို့ ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အခြားဘဏ်များ၏ငွေထုတ်ကတ်များနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဘဏ်များ၏ အကြွေးဝယ်ကတ်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
Onepay အကောင့်သို့ ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပရှိ မည်သည့်ဘဏ်မှ MPU, VISA (သို့) Master ကတ်ကို မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
MPU Debit ကတ်မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
ဘဏ်တိုင်းရဲ့ မည်သည့် MPU Debit ကတ်ကိုမဆိုအသုံးပြုပြီး ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကတ်သည် e-commerce လျှောက်ထားပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။
Onepay အကောင့်ထဲကို ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးရတာတွေရှိပါသလား?
ယခုအချိန်အထိ Onepay အကောင့်ထဲကို ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်းမရှိသေးပါ။
Onepay အကောင့်ကနေ ငွေထုတ်ယူလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ သင့် AGD Bank အကောင့်ကို ငွေပြန်လွှဲပြီး ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် (သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ မှတစ်ဆင့်လည်း ငွေထုတ်ယူလို့ ရပါတယ်။
Onepay အကောင့်ထဲမှ ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက် Charges ပေးရတာတွေရှိပါသလား?
သင့် AGD Bank အကောင့်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်းမရှိပါဘူး။ Onepay ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ငွေထုတ်ခြင်းအတွက်တော့ ဝန်ဆောင်ခ ၃,၀၀၀ ကျပ်ထက်မပိုတဲ့ ၁.၂၅% ကောက်ခံပါတယ်။
Onepay ကို ပစ္စည်းဝယ်ဖို့နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရယူဖို့ အသုံးပြုလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ Onepay Logo နဲ့ QR code ရှိတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ပစ္စည်းဝယ်ဖို့နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ငွေပေးချေဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
QR Code နဲ့ ငွေဘယ်လို ပေးချေရမလဲ။
၁။ ဆိုင်မှာရှိတဲ့ QR code ကို Scan ဖတ်ပါ။
၂။ ပေးချေလိုတဲ့ ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ ငွေပေးချေလိုကြောင်းကို Passcode ရိုက်ထည့်ပြီး အတည်ပြုပါ။
ငွေလက်ခံမည့်သူထံ ငွေရောက်သွားကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
ငွေလွှဲခြင်း/ ငွေပေးချေခြင်း တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးတိုင်း အောင်မြင်ကြောင်း အတည်ပြု notification လက်ခံရရှိပါမယ်။
Payment ပေးချေပြီးတိုင်း sms (သို့) e-mail ပို့ပေးပါသလား။
Onepay အသုံးပြုသူအားလုံး အနေဖြင့် payment ပေးချေပြီးတိုင်း sms အစား Push Notification ရရှိပါမယ်။ High-KYC အကောင့်များအတွက် e-mail ပါ ထပ်မံပို့ပေးပါတယ်။
သုံးပြီးသား Transaction တွေကို ဘယ်နှလစာထိ ပြန်ကြည့်လို့ရလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)လအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Transaction တိုင်းကို ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
မိုဘိုင်းလ် Interbank ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ feature က ဘာလဲ။
Onepay app ကို အသုံးပြုပြီး Onepay အကောင့်ရှိ “ငွေလွှဲပါ” ဆိုတဲ့ icon ကနေ အခြားဘဏ်အကောင့်တွေကို တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို AGD ဘဏ်က ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
Onepay အကောင့်ကနေ ဘယ်ဘဏ်အကောင့်တွေကို ငွေလွှဲလို့ရလဲ။
လက်ရှိမှာ ပြည်တွင်းဘဏ် (၁၆)ခုကို တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်။ ဒီဘဏ် (၁၆)ခုကတော့ A Bank, AGD Bank, AYA Bank, CB Bank, CHID Bank, GTB Bank, KBZ Bank, MAB Bank, MCB Bank, MOB Bank, MTB Bank, MWD Bank, SHWE Bank, SME Bank, UAB Bank နဲ့ Yoma Bank တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Onepay ရဲ့ မိုဘိုင်းလ် Interbank ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ရှိပါသလား။
သင်ငွေလွှဲလိုတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုဝန်ဆောင်ခများမှာ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များရဲ့ ဘဏ်ခွဲကောင်တာများတွင် ကောက်ခံနေသော လက်ရှိနှုန်းထားများအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ Onepay app ကနေ ငွေလွှဲအတည်မပြုခင် ထိုဝန်ဆောင်ခကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Onepay ကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲခြင်းအတွက် မည်သည့်အပိုဝန်ဆောင်ခမှ ထပ်မံပေးဆောင်ဖို့ မလိုပါ။
Interbank ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ငွေလွှဲရင် လက်ခံမယ့်အကောင့်ထဲကို ငွေရောက်ရှိဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ဘဏ်အကောင့်အတွင်း ငွေလက်ခံရရှိရန် ရုံးဖွင့်ရက် (၁)ရက် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
Interbank ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး ငွေဘယ်လိုလွှဲရမလဲ။
၁။ Transfer ကိုနှိပ်ပြီး လွှဲမယ့်ဘဏ်ရွေးချယ်ပါ။
၂။ ငွေလက်ခံမယ့်လူရဲ့ အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ မြို့ကို ရွေးပါ။
၃။ ငွေလက်ခံမယ့်သူရဲ့ အကောင့်နံပါတ်၊ နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ဖြည့်ပါ။
၄။ လွှဲလိုသည့် ငွေပမာဏကို ဖြည့်ပါ။
၅။ ဝန်ဆောင်ခကို စစ်ဆေးပြီး ငွေလွှဲလိုကြောင်း အတည်ပြုပါ။
ငွေလက်ခံသူရဲ့ အကောင့်အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းလို့ရလား?
‘Save Receiver’ ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ငွေလက်ခံသူရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ယခုလိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ခါငွေလွှဲတဲ့အခါ contacts ထဲကနေ အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ရုံပါပဲ။
ဘဏ်အကောင့်ထဲကို အများဆုံးငွေလွှဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကန့်သတ်ချက်ရှိလား။
တစ်နေ့ကို အများဆုံး ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀)အထိ လွှဲနိုင်ပါတယ်။ Verified လုပ်ထားတဲ့ Onepay အကောင့်များသာ ဒီ Interbank ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Onepay ကိုယ်စားလှယ် (သို့) ကုန်သည် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Onepay ကိုယ်စားလှယ် (သို့) ကုန်သည်တစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် 09-6883 83838 (သို့) contact@onepay.com.mm သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Onepay ကို Download ရယူနည်း
Onepay အကောင့်ကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာမှတ်ပုံတင်နည်း
MPU card များအသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူငွေဖြည့်သွင်းနည်း
123 ဝန်ဆောင်မှုမှ တဆင့် လွယ်ကူစွာငွေဖြည့်သွင်းနည်း
ဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် Onepay ထဲသို့ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
Onepay Cash in ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် Onepay ထဲသို့ငွေဖြည့်သွင်းနည်း
5BB သို့ အင်တာနက်ဘေလ်များပေးချေနည်း
ONE-Shop ကိုသုံးပြီး shopping ဘယ်လိုထွက်မလဲ
သင့်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး အချိန်၊ နေရာမရွေး Digital Code များဝယ်ယူနည်း
COVID-19 သတင်းများ Onepay အက်ပ်တွင် ဖတ်ရှုနည်း
MyanCare မှ ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ အချိန်မရွေးရယူနည်း
ဘဏ်အကောင့်များသို့ Onepay အသုံးပြုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူငွေလွှဲနည်း
Premium wallet balance ကိုအသုံးပြုဖို့ Onepay အကောင့်အား မှတ်ပုံတင်ခြင်း
YCDC သို့ Onepay မှတဆင့် အခွန်များပေးဆောင်ခြင်း
Visa/Master ကတ်များ အခမဲ့ချိတ်ဆက်ကာ အသုံးပြုနည်း
ONE-Bills ကိုအသုံးပြုပြီး သင့် lifestyle ကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် လုပ်ဆောင်နည်း
TrueMoney agent များမှတဆင့် Onepay ထဲသို့ငွေသွင်းနည်း
Game Currencies များကို Onepay မှတဆင့်ဝယ်ယူနည်း
ပြည်တွင်းဘဏ်များသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ငွေလွှဲပေးပို့နည်း
သင့်အကြိုက် Cable TV လစဉ်ကြေး Onepay နဲ့ပေးဆောင်နည်း
ငွေပေးချေမှုအားလုံးအတွက် အက်ပ် တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ Onepay ကို App Store (iOS) နှင့် Play Store (android)တို့တွင် အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပါဝင်တဲ့ Onepay ကို နာမည်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ထည့်သွင်းကာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသုံးအများဆုံး ကတ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် MPU card ကိုအသုံးပြုပြီး Onepay wallet ထဲသို့ အလွယ်တကူငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
123 service ကိုအသုံးပြုပြီး Top-up ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ 123 counter မှာငွေဖြည့်ပြီး Onepay နဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာငွေချေလိုက်ပါ။
သင်၏ လူနေထိုင်မှုဘဝ ကိုပြောင်းလဲ အဆင်ပြေစေမည့် Onepay ကိုဘဏ်အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
သင်နဲ့အနီးဆုံးမှာ အမြဲအသင့်ရှိနေမယ့် Onepay Agent တွေကနေ ငွေဖြည့်လိုက်ပါ။
သင့်ဆီမှာ Onepay အက်ပ်တစ်ခုရှိနေရင် အင်တာနက်ဘေလ် အတွက် အပြင်ထွက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ငွေကိုင်ဆောင်စရာမလိုပဲ အိမ်မှာနေရင်း ONE-Shop ကနေတဆင့် စျေးဝယ်လိုက်ပါ။
သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ လူမှုကွန်ယက်တွေ နဲ့ ဂိမ်းတွေကို ပျော်ရွှင်စွာခံစားအသုံးပြုလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးရ ကျန်းမာရေးသတင်းတွေကို Onepay ကယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေကနေ သင့်ဆီသယ်ဆောင်လာပါပေးမှာပါ။
Onepay ရှိရင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရယူဖို့နဲ့၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ မိမိနေအိမ်ကနေပဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အက်ပ် တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်မျိုးစုံ ကို ဘဏ်အထိသွားစရာ မလိုပဲ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ငွေလွှဲလို့ရနေပါပြီ။
မတူတဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေကို ငွေလွှဲဖို့၊ဘဏ်အကောင့်ဘဏ်မျိုးစုံကို ငွေလွှဲဖို့ Onepay ရှိပါတယ်။
Premium user ဖြစ်ဖို့၊ Interbank feature အသုံးပြုဖို့၊ ပိုမိုများပြားတဲ့ wallet balance ဖြည့်ဖို့ verify လုပ်လိုက်ပါ။
Onepay နဲ့ YCDC ထံပေးဆောင်ရမယ့် အခွန်အခတွေကို ပေးချေပြီး အချိန်ကုန်သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ visa/master card တွေကို Onepay account နဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာချိတ်ဆက်ပြီး အကောင်းဆုံးသော features တွေကို အက်ပ်တစ်ခုတည်းကနေရယူလိုက်ပါ။
ဘေလ်ဆောင်တာတွေ၊ အခကြေးငွေဆောင်တာတွေ၊ ခရီးသွားလက်မှတ်တွေ၊ ငွေသွင်းတာတွေဟာ Onepay အက်ပ်တစ်ခုရှိရင် အလုပ်ပိုတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။
နေ့စဉ်ဘဝ လုံခြုံစိတ်ချ အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ Onepay အက်ပ်ကို TrueMoney ဆိုင်တွေကနေငွေဖြည့်လိုက်ပါ။
Games currency တွေဝယ်ယူရတာ Onepay အက်ပ် တစ်ခုရှိရင် လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။
Account တစ်ခုတည်းကနေ မတူညီတဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကို ငွေလွှဲဖို့ Onepay အက်ပ်ကနေလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Check out the video to see how easy SkyNet bill payment is with Onepay. Relax and chill at your home watching SkyNet and make payments with Onepay anytime, anywhere!